မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: သက်ဆိုင်သူသို့
You talking about Crisps from Burma?
Regardless of the quality or quantity of your favourite one, wondering how you would judge the quality of vegetable oil they use. Apparently, some proportion of oil in Burma has been contaminated with harmful chemicals.
မဗေဒါပြောတာ တိုးတိုး ငပိအာလူးကြော် ထင်တယ်.... ကျွန်တော်လည်း ငယ်ငယ်တည်းက စားဖူးတယ်.... ကြိုက်တယ်.... ထမင်းနဲ့ စားရင် အရမ်းကောင်းတယ်.... ဟင်းမကြိုက် တဲ့အခါ အကောင်းဆုံးပေါ့....အခုတော့နည်းသွားတာအမှန်ပဲ....
11/08/2009 5:21 PM
ဟုတ် ... တိုးတိုးအာလူးကြော်ကို ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ် .. အမြဲလိုလိုဝယ်စားတယ် .. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ထုံးစံကကို အဲ့လို .. ဈေးကြီးကြီးလာမယ် အရည်အသွေးက ကျကျသွားမယ်
ဒါပါပဲ ..း( ... ခုကျွန်တော်လည်း ဒီပို့စ်ဖတ်ပီး မစားတော့ပါ ...
We can't expect to avoid the harmful chemical in the oil or whatever they have since they are almost in every food we consume. Despise of these things, i just complaining that they can't even keep just this original quality things. Since we were born in this century, there arealot of harmful chemicals things are all around us.
အထက်တန်းတုန်းက စားကောင်းတာ မှတ်မိတယ် .. ကြိုက်လည်း ကြိုက်တယ် .. ထမင်းနဲ့လည်း စားဘူးတယ် .. ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်း အရသာကို မကြိုက်တော့တာ .. စားနေကျလူဆိုတော့ သိတယ်လေ .. အချပ်လေးတွေ ပါးသထက်ပါး .. တူးတူးမဲမဲနဲ့ .. လေထိုးထားတဲ့အထုပ်ကြီးထဲမှာ ပါတာက ၅ ပုံ ၁ပုံလောက် .. မစားတော့တာကြာပြီ .. နောက်လည်း စားဖို့ စိတ်မကူးတော့ဘူး .. စိတ်လေဒယ် ........
အခုတော့ တိုးတိုးက တကယ် ညံသွားပါပြီ။ သူ့အစား ဖြိုးဓနဆိုတာ တက်လာတယ်. ပြီးတော့ "ဆရာမလေးအာလူးကြော်" ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။
ကျောင်းသူဘ၀ကိုတော့ အမှတ်ရမိပါသေးတယ်။ အမြဲတမ်း အားလူးကြော်တစ်ထုပ်နဲ့။ ^_^
Btw, ဒီဘလော့ကို အခုမှ သိတာပါ. Bookmarks တော့ လုပ်သွားပြီ.
သူမြင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများအောင် လောရှည် - ကတဲ့ပွဲမှာ ထပ်ဆင့် ဖော်ပြပေးမယ်လေ။
ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် ထုံးစံအတိုင်း lawshay@lawshay.com ကို မေးလ်လေး တစ်စောင် ...
သူဇာရေ.. ဖြိုးဓနဆိုတဲ့ တံဆိပ်တော့ မြင်ဘူးတယ်... peninsula မှာ ရှာပြီး try ကြည့်လိုက်အုံးမယ်...
Bookmark လုပ်သွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာ..
လောရှည်ရေ... အီးမေးလ် ပို့ပြီးပါကြောင်း...
I also totally agree with that.
It was my favorite snack since my childhood days; also my curry sometimes like in your post.
I also can't stand anymore for the reduced amount in each packet so that I seldom buy and eat that.
Cheers for your decision. ;)
My suggestion for them is to increase the amount as well as the price if they can't cover the production cost with big amount. As for now, I have to eat 2-3 packets for one time and I feel like paying more for the package cost. ;(